Guqula umfanekiso ube pdf: amaqhinga okuwenza ngeendlela ezizezinye | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Guqula umfanekiso ube pdf
Ngaba ukhe wadibana nesidingo sokuguqula umfanekiso ube yiPDF? Ngaba uyazi ukuba inokwenziwa? Ngamanye amaxesha, xa usenza i-infogram, okanye igrafu kwaye kufuneka wabelane ngayo ngendlela "yobungcali", uyawufuna loo mfanekiso ukuba uguqulwe ube yiPDF.
Kodwa, Uguqula njani umfanekiso ube yiPDF? Ngaba zikhona iinkqubo okanye zingenziwa ngaphandle kokufaka nantoni na okanye ukufaka nayiphi na into kwi-Intanethi? Namhlanje sithetha ngale nto kwaye siza kukunika isisombululo sayo yonke into.
1 Yintoni ifayile yomfanekiso
2 Yintoni i-PDF
3 Ungawuguqula njani umfanekiso ube yiPDF
3.1 Guqula umfanekiso ube yi-PDF kunye nomhleli wokubhaliweyo
3.2 Guqula umfanekiso ube yi-PDF ngenkqubo yokuhlela umfanekiso
3.3 Guqula i-PDF kwi-intanethi
Yintoni ifayile yomfanekiso
Umfanekiso, okanye ifayile yomfanekiso, yi ifomathi apho kugcinwa khona idatha yedijithali yomfanekiso kwaye oku kunokufumaneka kwiifomathi ezahlukeneyo, ezaziwa kakhulu ngokuba yiJPEG (okanye iJPG), i-GIF, iPNG, iWebP (yangoku) ...
Ngamanye amagama, sithetha ngefomathi apho kwamkelwe ukuba kukho umfanekiso kuyo kwaye, ngenxa yoko, imelwe. Oku kunokuvulwa ngeenkqubo ezininzi.
Ngokwenxalenye yayo, i-pdf sisichazi sento eyaziwa ngokuba yiFomathi yoXwebhu oluPhathekayo, okanye iFomathi yoXwebhu oluPhathekayo. Njengoko igama layo libonisa, luhlobo loxwebhu oluboniswe ngombane.
Kwakunjalo iphuhliswe yiAdobe kwaye okwangoku iyeyona yenye yezona zifanelekileyo ekuthumeleni nasekujongeni amaxwebhu obuchwephesha, kuba ikunika uyilo olugqibeleleyo kunye nolwakhiwo lwalo naluphi na usetyenziso, ukusuka ekunikezeleni nge-resume okanye umsebenzi, ukuyila incwadi kwaye ilungele ukushicilelwa. .
Ungawuguqula njani umfanekiso ube yiPDF
Ngoku ukuba uyazi ukuba ibinzana ngalinye libhekisa kwintoni, kwaye ucacile ngumahluko phakathi komnye nomnye, lixesha lokuba ukwazi ukuguqula umfanekiso ube yiPDF.
Kule nto, kukho iindlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo. Umzekelo, unako yenza ngomhleli wokubhaliweyo, ngenkqubo yokuhlela imifanekiso okanye kwi-Intanethi.
Ukukunika iindlela ezininzi, makhe sithethe ngayo nganye nganye.
Guqula umfanekiso ube yi-PDF kunye nomhleli wokubhaliweyo
Namhlanje abahleli beetekisi abasetyenziswa kakhulu, ukongeza kwiLizwi, nguMlobi weLibreOffice kunye neOpenOffice. Zonke ziyafana ekusebenzeni kwazo, ke ngoko kunokwenzeka ukuba amanyathelo esiza kuwabonisa ayafana kubo bonke.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile vula uxwebhu olungenanto kumhleli wokubhaliweyo. Emva koko cofa Faka / umfanekiso. Oku kuyakuvumela ukuba ukhangele ikhompyuter yakho kumfanekiso ofuna ukuwufaka, oya kuba nguwo ofuna ukuguqula ube yiPDF.
Nje ukuba unayo, into eqhelekileyo kukuba iyaqhelana nobukhulu bephepha leLizwi, oko kukuthi, ubungakanani A 4 kodwa ungayitshintsha ngaphambili kwaye ubeke iifomathi zephepha ezahlukeneyo ukuze iphepha liphume ngeendlela ezahlukeneyo kwaye, nge yona, umfanekiso owenzayo.
Emva koku, iya kugcinwa kuphela, kodwa njengoko uyazi, iifomati ezingagqibekanga zibhaliweyo, oko kukuthi, i-.doc okanye .odt. Ukuyitshintsha, endaweni yokugcina, kufuneka ugcine njenge. Ngale ndlela unokutshintsha ifomathi.
Ngoku kufuneka ufumane ifomathi yePDF, uyinike igama kwaye ekugqibeleni ucofe ukugcina .. Kwaye uya kuba nayo kwiPDF.
Guqula umfanekiso ube yi-PDF ngenkqubo yokuhlela umfanekiso
Inketho elandelayo esiyicebisayo yile Guqula umfanekiso ube yiPDF ngenkqubo yemifanekisoOko kukuthi, ngeenkqubo ezinjenge-Photoshop, GIMP, njl.
Uninzi lwazo lukuvumela ukuba urekhode kwiifomathi ezahlukeneyo, enye yazo yiPDF, ke ngekhe ube nengxaki enkulu ngayo.
Kodwa wenza njani? Ukuqwalasela:
Into yokuqala ekufuneka uyenzile ukuvula inkqubo yomfanekiso onayo. Phantse zonke ziyafana ngokwemigaqo yemiyalelo ukuze ungabinangxaki ukusilandela.
Nje ukuba kuvulwe, kuya kufuneka ucofe ukuvula ukuze ube nomfanekiso ofuna ukuwaguqula ube yiPDF kwinkqubo. Olunye ukhetho onalo kukuvula ifolda apho kukho umfanekiso, beka isikhombisi emfanekisweni kwaye ucofe iqhosha lasekunene (elinye lasekhohlo ukuba ulinxele). Apho kuya kufuneka ucinezele ukuvula nge ... kwaye uya kufumana igama lenkqubo yokuhlela umfanekiso. Oku kuya kuthumela umfanekiso kwinkqubo.
Sele unayo kwinkqubo. Kwaye ngoku kufuneka uguqule umfanekiso ube yiPDF. Kule nto kuya kufuneka ugcine njenge ... Kule meko, uya kufumana iifomati zemifanekiso emininzi: jpg, gif, png ... kodwa unokufumana iPDF. Kulapho kuya kufuneka ucofe khona.
Emva kokuqinisekisa ezi mpawu zilandelayo zePDF, uya kuba nayo ilungile kwikhompyuter yakho, kwaye ungayithumela nakubani na oyifunayo okanye uyisebenzise njengoxwebhu lobuchwephesha kuyo nayiphi na into oyifunayo.
Guqula i-PDF kwi-intanethi
Ukuba awufuni ukusebenzisa umhleli wokubhaliweyo, awunayo inkqubo yokuhlela imifanekiso exhasa ifomathi yePDF, okanye ufuna ukuyenza kwi-intanethi kwaye ungakhathazeki, zininzi iindlela onokukhetha kuzo.
Ngapha koko, zikho amawaka amaphepha okuguqula umfanekiso ube yiPDF, ke okucetyiswayo zezi:
Inkqubo kuzo zonke ziyafana. Qala ngokulayisha umfanekiso ofuna ukuguqula. Nje ukuba ilayishwe, uguquko luqala kwaye kwimizuzwana embalwa iya kukuvumela ukhuphele iPDF yaloo mfanekiso ngaphandle kokuqhubeka.
Ngoku, Xa luxwebhu olubaluleke kakhulu, kwaye ngaphezulu kwayo yonke into yabucala kunye nedatha ekufuneka uyikhusele, asikucebisi ukuba usebenzise le ndlela Ngenxa yokuba unokubeka ulwazi emfanekisweni emngciphekweni (nangona amaphepha aqinisekisa ukhuseleko, ngalo mzuzu xa ulilayisha ulahlekelwa kukulawula into enokwenziwa ngalo mfanekiso).
Enye into ekufuneka uyithathele ingqalelo xa usebenzisa le ndlela kukuba, kwiimeko ezininzi, uyakufuna umfanekiso ube nefomathi ye-jpg kuba yeyona ixhaphakileyo ukuguqula. Ngamanye amaxesha, ii-png ziya kukuvumela ukuba uziguqule. Kodwa ngezinye iifomati zomfanekiso uza kuba neengxaki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Guqula umfanekiso ube pdf
Ezona nkqubo zibalaseleyo zokuhlela iifoto